XOG: Al-shabaab oo burburineysa heshiis ay horey ula gashay Somaliland (Sababta Ogow) | Garqaad News Agency
XOG: Al-shabaab oo burburineysa heshiis ay horey ula gashay Somaliland (Sababta Ogow)
Jul 29, 2017 - Comments off
Xarakada Al-shabaab ayaa qorsheyneysa iney ka baxdo heshiis ay horey u wada galeen maamulka Somaliland, taasi oo ku aadaneyd iney nabad geliyaan deegaannada maamulkaasi, iyaguna ay si nabad ah ugu noolaadaan, lacagna la siiyo.
Kadib markii Hargeysa laga furey Kaniisay, waxay Al-shabaab go’aansadeen ineysan sii wadin heshiiska, islamarkaana tallaabo adag ay qaadaan.
Saraakiisha Al-shabaab u qaabilsan Somaliland ayaa la sheegay iney xiriir la sameeyeen xukuumadda Siilaanyo, taasi oo ku aadan in la burburiyo kaniisadda, islamarkaana maamulka qirto qalad ay sameeyeen iney tahay.
Hase ahaatee maamulka ayaa diidday sida la sheegayo iney ka laabtaan arrintaasi, waxaana Al-shabaab ay hadda ka fekerayaan qorshaha xiga, mar haddii ay burburinayaan heshiiska Somaliland.
Al-shabaab ayaa tallaabooyinka ay qaadi karaan waxaa kamid ah weeraro iyo sidoo kale iney bartilmaameed ka dhigtaan kaniisaddan.Somaliland ayaa kaniisaddan u aqbashay si ay caalamka uga hesho aqoonsi, iyada oo sasabaneysa maamulka dalalka reer Galbeedka ah.